သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များအား 5000တန်၊1000တန်တို့ကို တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ်လှူ သိန်း 180 ကျပ် လှူဒါန်းသော မိသားစု - MM Live News
သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလ႐ွင္မ်ား၏ သာသနာဖခင္ႀကီး သီဟသုဓမၼမဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင္သန္းစိန္ ဇနီး သာသနာမိခင္ႀကီးေဒၚေအးျမင့္သန္း သမီး မစိုးစိုးသန္း မိသားစုတို႔မွ တစ္လလ်ွင္ သာသနာႏြယ္ဝင္ဆရာေလးမ်ားအား 1000တန္က အရြက္ 2500 ….
5000တန္က အရြက္ 500 ေပါင္း အရြက္ေရ 3000 1000တန္ 5ရြက္လွ်င္ 5000တန္တစ္ရြက္ညွပ္ အားလံုးအပါး 3000 ခန္႔ကို တစ္ျပိဳင္ထဲလွဴပါတယ္ …..
လွဴသူ 18 ေယာက္ခြဲလွဴ 10 မိနစ္ မႀကာပါ …အပါး 3000 မလွဴခင္ အသက္ 60 အထက္ 500 ခန္႔ကို 2000 က်ပ္စီ အရင္လွဴပါသည္ ။အမ်ားလွဴတဲ႔အခါမွာ 1000 က်ပ္က်လွ်င္ 3000 က်ပ္ရမည္ 5000 က်ပ္က်လွ်င္ 7000 ရပါမည္ ျပီးလွ်င္ ေက်ာင္းတိုက္ခြဲ 40 အား တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ 50000 က်ပ္စီ ထပ္လွဴပါသည္ ။
အာရံုဆြမ္းအပါအဝင္ တစ္ခါလွဴလွ်င္ သိန္း 90 က်ပ္ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္လွဴ သိန္း 180 က်ပ္ လွဴပါသည္။လွဴဒါန္းပါသည္ ျမန္မာ ျပည္ရိွသူေတာ္စင္သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ရန္ေျပာျပအပ္ပါသည္။ဓမၼရတနာ
သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်များ၏ သာသနာဖခင်ကြီး သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန် ဇနီး သာသနာမိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့မှ တစ်လလျှင် သာသနာနွယ်ဝင်ဆရာလေးများအား 1000တန်က အရွက် 2500 ….
5000တန်က အရွက် 500 ပေါင်း အရွက်ရေ 3000 1000တန် 5ရွက်လျှင် 5000တန်တစ်ရွက်ညှပ် အားလုံးအပါး 3000 ခန့်ကို တစ်ပြိုင်ထဲလှူပါတယ် ……
လှူသူ 18 ယောက်ခွဲလှူ 10 မိနစ် မကြာပါ အပါး 3000 မလှူခင် အသက် 60 အထက် 500 ခန့်ကို 2000 ကျပ်စီ အရင်လှူပါသည် ။အများလှူတဲ့အခါမှာ 1000 ကျပ်ကျလျှင် 3000 ကျပ်ရမည် 5000 ကျပ်ကျလျှင် 7000 ရပါမည် ပြီးလျှင် ကျောင်းတိုက်ခွဲ 40 အား တစ်ကျောင်းလျှင် 50000 ကျပ်စီ ထပ်လှူပါသည် ။
အာရုံဆွမ်းအပါအဝင် တစ်ခါလှူလျှင် သိန်း 90 ကျပ် တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ်လှူ သိန်း 180 ကျပ် လှူပါသည်။လှူဒါန်းပါသည် မြန်မာ ပြည်ရှိသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန်ပြောပြအပ်ပါသည်။ဓမ္မရတနာ
November 9, 2019 MM Live
သာကေတကပ်ပီတယ်နားမှာ ဖြစ်သွားတာ၊ တို့ဆေးများမိသွားတာလား
October 27, 2019 MM Live